❤️ Sida loola xidhiidho dadka saameeya Instagram-ka - Winches Club
Haddii aad rabto inaad la xiriirto sumcadaha waaweyn iyo saameeyayaasha ku jira bartaada Instagram, waxaa jira waxyaabo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad uga fogaato in xabbad lagugu dhufto.
Waxaa jira in ka badan hal bilyan oo adeegsadayaasha Instagram ah oo firfircoon, iyo haddii aad rabto inaad iskaashigan kula yeelato saamayn weyn ama sumcad caan ah, waxaad u baahan doontaa inaad istaagto oo aad hubiso in lagu maqlay. Instagram waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee loola xiriiri karo sumadaha kale loona kordhiyo warbaahinta bulshada iyo joogitaanka ganacsiga..
Maqaalkani wuxuu ku saabsan yahay habka ugu wanaagsan ee loo qaado si loo soo jiito dareenka dadka oo aad loogu farxo inay kula shaqeeyaan.. Xusuusnow in qaar ka mid ah xisaabaadka waaweyn ee Instagram heli doonaa boqolaal farriimo maalin kasta, sidaas darteed waa muhiim in la istaago oo isla markiiba laalaado.
La xiriir Calaamadaha iyo Saameeyayaasha barta Instagram
Haddii aad qorshaynayso inaad saamayn ku yeelato xisaabaadka saamaynta, wax kasta oo cabbirkaaga ah ama baaxadda kuwaan ah, waa inaad samaysaa waxyaabaha soo socda:
Bartilmaameed dadka saxda ah – waa wax aan micno lahayn in farriimo loo diro dadka aan ku danaynayn ama aan ku habboonayn summadaada astaantaada iyo shakhsiyaddaada
U keen qiimaha – dad badan ayaa xoogga saara waxa ay isku dayayaan inay gaaraan, halkii ay xoogga saari lahaayeen sidii ay u caawin lahaayeen qofka ay gaaraan
Aqbal diidmada – waa inaad dirtaa farriimo badan oo qaar badan oo ka mid ahi seegi doonaan summaddoodii, markaa diyaar u noqo inaad aqbasho diidmada
Ku dadaal – waa inaad sii wadaa oo aadan quusan, xataa marka la eego diidmada joogtada ah iyo jaahilnimada Hadda oo aad leedahay fikrad aasaasi ah oo ku saabsan sida loo sii wado, aan guda galno faahfaahinta.
Bartilmaameedka Dadka Saxda ah
Si aad u hesho natiijada ugu fiican, waa inaad bartilmaameedsataa xisaabaadka la xiriira waxa ku jira. Waxaan dhowaan daabacnay maqaal ku saabsan sida ugu dhakhsaha badan loogu helo akoonno cusub oo ku jira niche -kaaga., markaa si dhakhso ah u akhri haddii aad rabto uun in xisaabo badan la maareeyo.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa hab aad u qoto dheer, daaran raadinta hashtag ama goob la xiriirta hoygaaga iyo dib u eegista xisaabaadka mid mid si loola xiriiro. Samaynta sidaas, isku day inaadan aad uga welwelin tirada raacsan, laakiin taa beddelkeeda xoogga saar heerka hawlgelinta iyo tayada waxa ku jira.
U keen qiimaha
Halkii loo diri lahaa boqolaal Farriimo oo wax la mid ah la weydiin lahaa, halkii aad isku dayi lahayd inaad hesho hab aad si uun u kordhiso qiimaha koontadan. Waxay u sahlanaan kartaa sida siinta nuxurkooda, u soo dir muunado, ama xitaa u soo bandhig foomka dalacsiinta.
Xulashadan u dambaysa waxay noqon kartaa mid xiiso leh haddii aad leedahay tiro badan oo raacsan onlayn ah oo ku yaal aagag kale sida mareegahaaga ama Facebook., laakiin inaad ku soo biirto barta Instagram. Sii qiimo dheeraad ah halkii aad wax uun ka codsan lahayd, waxaana laga yaabaa inaad ogaato in xisaabaadyadan ay si fiican u daboolaan dalabaadkaaga.
Waxay u badan tahay inaad dirto farriimo badan kahor intaadan meelna gaarin, waxaana jiri doona waxyaalo badan oo la diido iyo xitaa qoraalo la iska indhatiro. Waxa ugu weyn ma aha in si shakhsi ah loo qaato, waxaa laga yaabaa inaad ku heshay waqti xun ama, haddii ay helaan farriimo badan, waxaa laga yaabaa inaysan arkin maamulahaaga guud. Isku day inaad ku ciyaarto lambarada hana u oggolaan diidmadu inay ku saameyso, waxay qaadan doontaa muddo ka hor intaan dadku bilaabin inay kuugu jawaabaan.
La soco qaybtii hore, waa inaad dirtaa farriimo badan oo waxa ugu muhiimsan ee aad sameyn karto waa inaad ku mashquusho howlahaaga. Waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad dirto 100 fariimo ka hor inta aanu qof ka jawaabin codsigaaga, ama laga yaabee xitaa 1000, laakiin macno malahan waayo mar walba waxay dhacdaa dhamaadka.
Waxa fiicani waa, taasi waa mar haddii aad iskaashi ku leedahay bacda, waxaad u isticmaali kartaa si aad uga faa'iidaysato si aad u hesho dadka kale. Waxaad u sheegi kartaa macaamiishaada : “Waxaan kala shaqeynayaa macmiilkan mashruucan, Waxaan rajaynayay in aan sidoo kale ku lug yeesho”.
Waxay noqon kartaa gorgortan weyn waxayna kugu soo jiidan kartaa dad badan., maxaa baraf ka dhigi kara hawlaha isku -xirkaaga.
Maqaal horeInstagram Search Hashtag Tool
Maqaalka XigaSida Loo Ogaado Haddii Qof Ku Xannibay Instagram